Value များနှင့် ကခုန်ခြင်း
“ Value ” = တန်ဖိုး ...... ကျွန်တော်တို့က လေးစား မြတ်နိုး စွာနဲ့ တန်ဖိုးထား တတ်တာ ရှိသလို၊ ကျွန်တော်တို့ အတွက် နဂိုကတည်းက သတ်မှတ်ထားတဲ့ တန်ဖိုး များ ရှိပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ အတွက် နဂိုကတည်းက သတ်မှတ်ထားတဲ့ တန်ဖိုး များလို့ ဆိုလိုတာက ပစ္စည်းတစ်ခု ရဲ့ သတ်မှတ်ထားသည့် တန်ဖိုးများဆို မြင်မယ်ထင်ပါတယ်။ Supermarket တစ်ခုကို ၀င်လိုက်တာနဲ့ ၀ယ်သမျှ ပစ္စည်းတိုင်းမှာ သတ်ဆိုင်ရာ တန်ဖိုးများ သတ်မှတ်ထားပြီး ဖြစ်နေပါပြီ။ ရွေးချယ်ခွင့်ကတော့ ပစ္စည်းကောင်းတာ မကောင်းတာ မျှသာ ရွေးချယ် ခွင့်ရှိပါတယ်။ တန်ဖိုးကတော့ ကိုယ့်စိတ်က တန်၏ မတန်၏ သတ်မှတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသော်လည်း ရယူပိုင်ဆိုင်ခွင့် အတွက်ဆိုရင်တော့ သတ်မှတ်ထားပြီးသား တန်ဖိုးအတိုင်းသာ ပေးချေရမှာပါ။
ကျွန်တော်တို့က လေးစား မြတ်နိုး စွာနဲ့ တန်ဖိုးထား တာမျိုးကတော့ ဥပမာပြောရရင် မွေးကင်းစ ကလေးတစ်ယောက် အတွက် မိခင်နို့ရည် ဆိုတာ အဲဒီကလေးအတွက် တန်ဖိုးအထားရဆုံး ဖြစ်သလို တန်ဖိုးအနေနဲ့ အခြေခံထားတာက ငွေကြေးမဟုတ်တဲ့ မေတ္တာ ပါ။တန်ဖိုးဖြတ် သတ်မှတ်လို့ မရနိုင်ပါဘူး။ အရွယ်ရောက်လာတဲ့ အခါကျတော့ မိခင်နို့ရည်ထက်ပိုပြီး တောင့်တစရာတွေ များလာပါတယ်။ ဥပမာ-ကစားစရာ အရုပ်လေးများ ၊ မုန့် စသဖြင့်ပေါ့။ဒီထက် ပို အရွယ်ရောက်လာတဲ့ ဆယ်ကျော်သက် ၀န်းကျင်မှာတော့ အ၀တ်အစား ၊ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း ၊ အတတ်ပညာ ၊ စာအုပ်စာပေ စသည်တို့ အပြင် လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေ သာရေးနာရေးတွေ က အစ လုပ်ချင်တာတွေ ဖြစ်ချင်တာတွေ များလာပါပြီ။ အဲဒီ အရာတွေ ထဲမှာ “ ကျွန်တော်တို့က လေးစား မြတ်နိုး စွာနဲ့ တန်ဖိုးထား တတ်တဲ့ အရာတွေ ရှိသလို၊ ကျွန်တော်တို့ အတွက် နဂိုကတည်းက သတ်မှတ်ထားတဲ့ တန်ဖိုး ရှိ အရာများလဲ ” ရောထွေးပါဝင် နေပါတယ်။
ကျွန်တော် ကြားဖူးတဲ့ အဆိုအမိန့်လေးတစ်ခု ရှိပါတယ်။ လူတစ်ယောက်မှာ ပထမ ဆုံးလိုအပ်ချက်က အစားအစာနဲ့ရေပါ။ အဲဒါပြည့်စုံပြီဆိုရင် နောက်ထပ်တောင့်တလာတာကတော့ နေထိုင်ရေးပါ။ စားဝတ်နေရေးဆိုတဲ့ အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေ ပြည့်စုံပြီဆိုရင်တော့ ချမ်းသာ ကြွယ်ဝမှု ၊ နဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့် အာဏာ ပါ။ အဲဒီ နောက်ကွယ်မှာတော့ ပတ်ဝန်းကျင်က ချစ်ခင်လေးစားမှု ဆိုတဲ့ အရာလေး ပါတဲ့ ချမ်းသာ ကြွယ်ဝမှု နဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့် အာဏာ၊ ချစ်ခင်လေးစားမှု ပေါ်အခြေမခံတဲ့ ချမ်းသာ ကြွယ်ဝမှု ၊ နဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့် အာဏာ ဆိုပြီးတော့ ကွဲပြားနေတာကို ကျွန်တော်တို့ တတွေ သေချာဆန်းစစ်ဖို့ လိုပါမယ်။
ချစ်ခင်လေးစားမှု ဆိုတဲ့ အရာလေး ပါတဲ့ ချမ်းသာ ကြွယ်ဝမှု နဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့် အာဏာ အထိ ပြည့်စုံဖို့ ဆိုတာ လူအများစုအတွက် အားလုံးပြည့်စုံဖို့ မလွယ်တဲ့ အရာပါ။ ကျွန်တော်တို့ ချမ်းသာ ကြွယ်ဝမှုကို အလေးပေးပြီး လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ ဖန်တီးမှာလား (သို့မဟုတ် ) လုပ်ပိုင်ခွင့် အာဏာကို အလေးပေးပြီး ချမ်းသာကြွယ်ဝအောင်လုပ်မှာလား။
ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု နဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကို အလေးပေးတဲ့ အခါမှာလဲ ချစ်ခင်လေးစားမှု ဆိုတဲ့ အရာကို အခြေခံတာနဲ့ အခြေမခံတာ ထပ်ပြီး စဉ်းစားဖို့လိုလာပါပြီ။ ဥပမာ - ရုံးတစ်ရုံးမှာ အရာရှိ နှစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုပါဆို့ ၊ ပထမ တစ်ယောက်က ငွေကြေးချမ်းသာတယ် အဆက်အသွယ် နောက်ခံတောင့်တယ်ပေါ့ ၊ သူ့ကတော့ သူ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်အတွက် သူ့အကျိုးအတွက် အဓိက ဦးစားပေးပြီး လုပ်တယ်ပေါ့။ ဒုတိယ တစ်ယောက်ကတော့ ငွေကြေးက ပုံမှန်ပါပဲ သူကတော့ သူ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်အတွက် အများကို အဆင်ပြေဖို့ ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်တတ်တယ်ပေါ့ ။ ရလဒ် အနေနဲ့ကတော့ ပထမ အရာရှိက ၀င်ငွေပိုကောင်း အဆင်ပြေ အထက်လူကြီးတွေကိုလည်း ပိုပြီး personal အနေနဲ့ supporting လုပ်ပေးနိုင်ပြီး ရာထူးတက်လဲ မြန်သလို အခွင့်ရေးကောင်းတွေ လဲ ပိုရတယ် ။ ဒုတိယ အရာရှိကတော့ ပထမ အရာရှိရဲ့ အစစ အရာရာ နောက်ကပဲ ဖြစ်နေပါတယ်။ သူ့စိတ်ကတော့ ရှင်းပြီး စိတ်ချမ်းသာတဲ့ ခံစားမှုလေး ပဲ ရမှာပါ။
အထက်က ဖြစ်စဉ်လေးကို သေချာစဉ်းစားပြီး စာသဘော အများအမြင် ကောင်းတဲ့ သဘောထက် ကိုကိုယ်တိုင် အဲဒီ နေရာမျိုးမှာ ရွေးချယ်ဖို့ အခြေအနေဖြစ်လာရင် အမှန်အတိုင်း ၀န်ခံပြီး ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင် ပထမ အရာရှိကို ရွေးမလား ဒုတိယ အရာရှိကိုရွေး မလားဆိုတာ ကိုယ်လေးစား တန်ဖိုးထားတဲ့ တန်ဖိုး (value ) ပေါ်မူတည်ပြီး ဆုံးဖြတ်သွားမှာ အသေအချာပါ။
ကျွန်တော်ထားမိတဲ့ value အကြောင်း ဝေမျှချင်ပါသေးတယ်။ တစ်ရက်က ကျွန်တော့် ငယ်သူငယ်ချင်း ချမ်းသာတဲ့ စီးပွားရေးသမား တစ်ယောက်ရဲ့ ပွဲလေးတစ်ခု သွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာ သူ ကျွန်တော့်ကို မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ သူတစ်ချိူ့က မြို့နယ် တစ်ခုမှာ တစ်ရက်ကိုတင် သိန်း ၂၀ ၊ ၂၅ လောက် ၀င်ငွေကောင်းနေတဲ့ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီးတစ်ဦး ၊ နောက်တစ်ယောက်က အဲဒီ ဒေသမှာ သိန်းထောင်ချီ ၀င်ငွေကောင်းနေတဲ့ စီးပွားရေးသမား ၊နောက်ထပ်လဲ အလားတူပါပဲ။ ကျွန်တော့် ရင်ထဲမှာ တော့ ပုံမှန် လူတွေနဲ့ မိတ်ဆက်ရသလိုပဲ ခံစားမိပါတယ်။ ထူးထူးခြားခြား မခံစားမိပါဘူး။ ပုံမှန် ဆိုရင်တော့ ဒီလိုလူတွေ နဲ့ ခင်မင်ခွင့်ရတာဟာ ကိုယ့်အတွက် အကျိူးရှိစရာ အားကျစရာပါ။ ထူးထူးခြားခြား အားမကျမိတာ အမှန်ပါ။အဲဒီ အချိန်မှာ ကျွန်တော် စိတ်ဝင်စား အားကျမိတာက အဲဒီပွဲမှာ လာရောက် ဖျော်ဖြေပေးတဲ့ မြို့ခံ တီးဝိုင်းနဲ့ သီဆိုဖျော်ဖြေသူ လူငယ်တွေပါ။ သူတို့တစ်တွေက ဒီပွဲ မှာ ဖျော်ဖြေရလို့လဲ စီးရီးထုတ် ဖို့ အတွက်ရွေးချယ်ခံစရာ အခွင့်အရေးမရှိသလို ငွေရေးကြေးရေး အနေနဲ့လည်း မယ်မယ်ရရ မရသလို အဲဒီ အပေါ်မှာလဲ စဉ်းစားစရာ မလိုအောင် ကိုယ်ပိုင် ရပ်တည်နိုင်ပါတယ်။ အားတက်သရော ဖျော်ဖြေနေသလို စုံစမ်းမေးမြန်းမိတဲ့ အခါမှာလည်း နောက် ၀ါသနာပါတဲ့ ကလေးတွေ ဆက်လက် ရပ်တည် နိုင်အောင် တီးဝိုင်းလေး ရည်ရှည် တည်တံ့ဖို့ နဲ့ သူတို့ရဲ့ ၀ါသနာ ရင်ခုံသံ ပျော်ရွှင်မှုလေးတွေပါတဲ့။ ဒါဟာ သူတို့ထားတဲ့ value တစ်ခုဆိုရင် မမှားပါဘူး။ အဲဒီ value ကို ကျွန်တော် လည်း တန်ဖိုးထားမိခဲ့ပါတယ်။
နောက် value လေးတစ်ခုကတော့ ငွေကြေးတတ်နိုင်တဲ့ မိသားစုက မိန်းခလေး တစ်ယောက်ပါ။ဆယ်တန်းအောင် တက္ကသိုလ်တက် အလုပ်ထဲဝင် ငွေတွေကောင်း ပြီး ကိုယ်ပိုင် ရပ်တည်နေပါတယ်။ အခြားတစ်ယောက်ကတော့ အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ်လောက်က စပြီး လူအများမြင်ကွင်းမှာ ထုတ်ပြောဖ်ို့ မသင့်တော်တဲ့ အလုပ်လုပ်နေရတဲ့ မိန်းခလေး တစ်ယောက်ပါ(ပျက်စီးနေသောမိန်းခလေးမဟုတ်ပါ)။ဒါပေမယ့် ဒီမိန်းခလေးဟာ အဲဒီ အလုပ်ကိုလုပ်ပြီး သူ့ဘာသာ ဆယ်တန်းအောင်ဖို့ ကြိူးစား ၊နောက် အဝေးသင်နဲ့ စီးပွားရေး ဘွဲ့ တစ်ခုယူတယ်။အဲဒီ ကာလ အတွင်းမှာလဲ မိသားစုကို ထောက်ပံ့ ညီတွေ ညီမတွေကိုလဲ ကျောင်းထားပေးနိုင်အောင် ကြိုးစားပေးခဲ့ပါတယ်။သူဘွဲ့ရသည် အထိ အပြင်အလုပ်လုပ်ပြီး မိသားစုကို ထောက်ပံ့ ဖို့ မလုံလောက်သေးလို့ အဲဒီ အလုပ်ထဲမှာပဲ ရှိနေပါသေးတယ်။ မိတ်ဆွေ အနေနဲ့ အဲဒီ မိန်းခလေး ၂ ယောက် ရဲ့ value ရွေးချယ်ရမယ် ဆိုရင် ဘယ်သူ့ကို တန်ဖိုးထားပြီး ရွေးချယ်မလဲ ? အဲဒီမှာ ကိုယ်ထားတဲ့ value က အများကြီး အရေးပါနေပါပြီ လူတစ်ယောက်ရဲ့ value ကို ဘာနဲ့ ဆုံးဖြတ်မှာလဲ ? ချမ်းသာကြွယ်ဝမှူနဲ့လား ၊ အခွင့်အာဏာနဲ့လား ၊ အဆင်းရှူပကာနဲ့လား ..စသဖြင့် မှားတယ် မှန်တယ် ဆိုတာထက် ကိုယ့်ထားတဲ့ value အစစ် ပေါ် မူတည်ပြီး ဆုံးဖြတ်မှာ အသေချာပါ။
value(တန်ဖိုး) ဆိုတာကို အဓိက ပြောချင်တာကတော့ ကျွန်တော်တို့ အရွယ်ရောက်လာပြီး ဘ၀အတွက် ကိုယ်လျှောက်မယ့် လမ်းကို ရွေးချယ်တဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သေချာဆန်းစစ်ပြီး “ ငါတော့ ဘယ်လို ဘ၀မျိူးကို နှစ်သက်လဲ၊ အားကျလဲ ၊ ပျော်သလဲ ၊ဘယ်လိုအရည်အချင်းတွေကို တန်ဖိုးထားသလဲ ” စသဖြင့် သေချာစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ လူတိုင်းတော့ နောက်ဆုံးပေါ်ကားစီးပြီး တိုက်နဲ့ ခြံနဲ့ နေချင်တာ အသေအချာပါ။ ဒါပေမယ့် ပုံမှန် စားဝတ်နေရေးတော့ အဆင်ပြေတယ် ၊ ချမ်းသာဖို့ အတွက် အခွင့်အရေးတွေ နေရာမှာ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင် ၊ ကိုယ့်လူမျိုး ၊ ကိုယ့်နိုင်ငံ က စပြီး ကမ္ဘာ့ လူမျိူးရေး ဆိုင်ရာ အထိ အသိပညာ အားဖြင့်လည်းကောင်း ၊ အတတ်ပညာအားဖြင့် လည်းကောင်း ..စသဖြင့် ဆောင်ရွှက်ပေးနေရတာကို နှစ်သက်ပျော်ရွှင်တာလား ( သို့မဟုတ် ) ချမ်းသာဖို့ ဦးစားပေးပြီးမှ ပဲ အခြား အရာတွေ လုပ်ချင်တာလား စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
အဲဒီထက် တစ်ဆင့် ဆင်းကြည့်မယ်ဆိုရင် လက်ရှိ ဒီအလုပ်ကိုင်က ၀င်ငွေကောင်းမယ် ၀ါသနာ သိပ်မပါဘူး။ ၀င်ငွေတော့ ကောင်းမှာ မသေချာသေးဘူး အဲဒီ အလုပ်ပေါ်မှာ ပင်ပန်းပေးမယ့် ပျော်ရွှင်စွာ ရေရှည်လုပ်နိုင် နေမယ် ။ ဒီလိုအခြေအနေမျိူးတွေ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်မှာ လူငယ်တွေ အတော်များများ ကြူံတွေ့နေ ကြူံတွေ့ ခဲ့ရမှာပါ။ အဲဒီ လို အခြေအနေ မျိူးမှာ ကိုယ်လေးစား တန်ဖိုးထားတဲ့ value အစစ် ကို သေချာရှာဖွေနိုင်ဖို့လိုပါမယ် ။ အဲဒီလိုသာ သေသေချာချာ ကိုယ့် တန်ဖိုးထားတဲ့ value ကို ရှာဖွေနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် အခြေအနေ တစ်ခု အချိန်တစ်ခု ဖြတ်သန်းပြီးတဲ့ အခါ ကိုယ့်ဘ၀ ကို ချမ်းသာသည်ဖြစ်စေ ၊ မချမ်းသာ သည်ဖြစ်စေ ကျေနပ်နေပြီး ရှေ့ဆက်မည့် လမ်းတွေ အတွက်လဲ ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ မြင်နိုင်မှာပါ။ ထို့ အတူပဲ အပေါင်းအသင်း မိတ်ဆွေတွေကလည်း ရင်ခုန်တဲ့ value ချင်းတူတဲ့ သူတွေ စုစည်းမိကြမှာပါ။
အရှင်းဆုံး ဥပမာ အနေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ကို ကျွန်တော်တို့ တစ်တွေ ဘာလို့ ချစ်ခင်လေးစား တန်ဖိုးထားသလဲ။ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကျွန်တော်တို့မှာ လူချင်းတွေ့ပြီး စကားတစ်ခွန်းတောင်ပြောဘူးတာမဟုတ်။ အထောက်အပံ့ဆို တစ်ခါမှ မရဘူးပါ။ ဒါပေမယ့် ဘာလို့ လေးစားကြည်ညိုကြလဲ ? ရှင်းပါတယ် …. ရင်ထဲမှာ ထားတဲ့ value အစစ်တွေ က ဆုံးဖြတ်သွားတာပါ။
ဒီတော့ မိတ်ဆွေတို့ အနေနဲ့ ဘယ်လိုအရာတွေကို တန်ဖိုးထားသလဲ ၊ ဘယ်လို အရည်အချင်းတွေကို တန်ဖိုးထားသလဲ ? သိသိကြီး value အတုတွေနဲ့ ရှင်သန်မနေစေချင်ပါဘူး ။ ကိုယ့်ရဲ့ value အစစ်တွေကို မှန်မှန် ကန်ကန်ရွေးချယ်ပြီး လျှောက်လှမ်းခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော့် အတွေးတစ်စအတွက် ကြည်းနူးနေမိမှာပါ။
Posted by Wai Phyo at 11:39 AM4comments Links to this post
Linear work flow (LWF ) & Gamma 2.2
3D Visualizer Pipe line မှာ ရပ်တည်နေတဲ့ သူတွေ အတွက် ကမ္ဘာ့ CG ၀န်းကျင်မှာ တွင်တွင် ပြောနေပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ ၀န်းကျင်မှာ တော့ ပြောတာ အတော်နည်းသလို စီနီယာ တွေ ၀န်းကျင်မှာ ကို တွင်တွင် ကျယ်ကျယ် အသုံး မပြုကြသေးတဲ့ workflow တစ်ခုကတော့ (LWF) Linear work flow & Gamma 2.2 setup ပါ ။ ကျွန်တော် အဓိက အခြေခံပြော မှာကတော့ 3ds max နဲ့ vray ပေါ် အခြေခံပြီး ပြောမှ ဖြစ်ပေမယ့် ဒီ concept ဟာ 3d software renderer အားလုံး အတွက် အသုံးဝင် ပါတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ် ။
3ds max မှာ default system gamma value အနေနဲ့ 1 ပါ ။ ထို့ အတူ material အတွက် texture တွေ ခေါ် ထည့် တဲ့ အခါမှာလဲ အဲဒီ ဖိုင်တွေ ကို gamma value 1 အနေနဲ့ ခေါ်သွင်းဖို့လဲ input gamma setting မှာ system gamma value အနေနဲ့ လဲ 1 ပါ ။ gamma value ကို အကြမ်းအားဖြင့် လွယ်လွယ် သဘောပေါက်အောင် ပြောမယ်ဆိုရင် gamma တန်ဖိုး များလာရင် ပိုပြီး လင်းလာ လေလေ တန်ဖိုးနည်းလာတာနဲ့ အမျှ ပိုမှောင်လေလေ လို့ ပြောရင် မြင်မယ် ထင်ပါတယ် ။
Gamma အနေနဲ့ 3d software တွေကို ဘယ်လို effect တွေ ဖြစ်စေလဲ ?
ကျွန်တော်တို့ အသုံးပြူနေတဲ့ monitor screen (digital screen) တွေ မှာ အ၀င် input voltage လိုပြီး output အနေနဲ့ Light intensity အနေနဲ့ ထွက်ပါတယ် ။ သီအိုရီ အနေနဲ့ ဆိုရင် input voltage နဲ့ output Light intensity က တိုက်ရိုက် အချိုးကျနေ ရပါမယ် ။ input power များလာရင် output Light intensity များလာ ရမယ့် သဘောပါ ။ နမူနာ graph လေးကို ကြည့်ပါ ..
တစ်ကယ် လက်တွေ့ မှာ input voltage များသလောက် output Light intensity က တိုး မလာပါဘူး ။ input voltage တိုးရင်း တိုးရင်းနဲ့ တစ်နေရာ ရောက်မှ ရုတ်ချည်း တက်လာပါတယ် ။ နမူနာ graph လေးကို ကြည့်ပါ ..
ပုံထဲ ကလို နည်းနေတဲ့ (curve ဖြစ်နေတဲ့) အခြေအနေ မျိုးမှာ 3d software မှာ ဖော်ပြတဲ့ light နဲ့ shadow area တွေ မှာ ရှိသင့်တာ ထက် ပိုပြီးမှောင် နေပါတယ် ။ mid tone တွေက bright ဖြစ်နေပြီး highlights တွေ က overbright ဖြစ်နေပါတယ် ။
အဲဒီ လွဲနေတာ ကို ပြန်ပြီး correction လုပ်ပေးဖို့ လိုပါမယ် ။ နမူနာ graph လေးကို ကြည့်ပါ ..
ပုံမှာ မြင်ရတဲ့ အတိုင်း ပြောင်းပြန် အချိုးကျ curve လေး ပြန်ထည့် ပေးခြင်း သဘောတရားနဲ့ ပြန်လည် ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ် ။ ဒီလို လုပ်ဆောင် ချက်ကို Gamma လို့ ခေါ်ပါတယ် ။
Autodesk 3ds max software မှာ ပုံမှန် အားဖြင့် အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့ သလို system gamma & input gamma default value တွေ ကို 1 အနေနဲ့ linear space အနေနဲ့ သွားပါတယ် ။ အဓိကက ကျွန်တော်တို့ ခေါ်သွင်းမယ့် material texture တွေ ဟာ အများစုက digital camera တွေ က မှ ရိုက်ယူထားပြီး edit လုပ်ထားတာ တွေ အများဆုံးပါ ။ digital camera တွေ ထဲမှာ ရိုက်ယူလိုက်တဲ့ ပုံရိပ်တွေ ကို gamma 1 အနေနဲ့ ပဲ ဖဖ်းပါတယ် ။ပြီးမှ gamma 2.2 auto ပြောင်းပေးလိုက်ပါတယ် ။ Raw image တွေ မှသာ 1 နဲ့ ထုတ်ပေးလေ့ရှိပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ခေါ်သွင်းမယ့် ပုံတွေ အများစုက ကိုယ်ပိုင် gamma 2.2 ရှိပြီး သားပါ ။ 3ds max system မှာ input အနေနဲ့ 1 လို့ ယူဆ ပြီး gamma 2.2 images တွေကို ခေါ်သွင်း ပြီး system gamma တန်ဖိုး 1 အတိုင်းပဲ screen မှာ ဖော်ပြတဲ့ အတွက် computer screen မှာ မြင်ရတဲ့ texture အရည်အသွေးထက် 3ds max material အနေနဲ့ ဖော်ပြ render လုပ်တဲ့ အခါ ပိုပြီး Dark ဖြစ်နေတာ ကို သတိထား ကြည့်ရင် မြင်နိုင်ပါတယ် ။
HDRI , Normal map ,bump map ..စသဖြင့် file အမျိုးအစားတွေက တော့ နဂိုတည်းက gamma value 1 ဖြစ်နေတဲ့ အတွက် ပြဿနာ မရှိပါဘူး ။ ထို့ အတူ color တွေ အနေနဲ့ လဲ system gamma 1 အနေနဲ့ပဲ ဆိုတော့ အခုနက material တွေ လိုပဲ dark ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ် ။
ကျွန်တော်တို့ gamma ကို 2.2 ပြောင်း correction လုပ်ပြီး စမယ် ( ပိုပြီး လင်းတဲ့ အခြေအနေ ) ဆိုရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်
gamma ကို 1 ပဲထား စမယ် ( မှောင်တဲ့ အခြေအနေ ) ဆိုရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် နောက်ဆုံး Result ကတော့ realistic ဖြစ်မယ့် အခြေအနေ ကိုပဲ ဦးတည် ပြီးတော့ သွားမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် အတူတူ ပါပဲ ။
လက်ရှိ ကိုယ့် ဟာကိုယ်ပဲ render လုပ် client ကို ပဲ ပြ ဆိုရင်တော့ ဒီတိုင်းပဲ ဆက်လုပ်လဲ အဆင်ပြေပါတယ် ။
Compositer တွေ အနေနဲ့ ကတော့ beauty pass ရအောင် render elements တွေ ပြန်ထပ်ရမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် မဖြစ်မနေ သုံးဖို့ လိုပါမယ် ။
ကျွန်တော့် အနေနဲ့ လည်း Compositor တွေ လို အထိ လုပ်နေရတာ မဟုတ်ပဲ render ထုတ် postproduction လုပ် အဲဒီ အထိပဲ ဆိုတော့ ဒီအတိုင်းပဲ သုံးလို့ တော့ အဆင်ပြေပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ဒီ အကြောင်းသိတဲ့ အချိန်က စပြီး gamma setup 2.2 နဲ့ linear workflow ကို သုံးပါတယ် ။
အဓိက အချက် ၂ ချက် ရှိပါတယ် ။
၁ ။ gamma value 1 အနေနဲ့ မှောင်နေတာ က စပြီး lighting တွေ ချိန်မယ်ဆိုရင် light intensity တွေ အများကြီးတိုး ရမယ် light တွေ ပိုလိုမယ် ဒါတွေကြောင့် shadow တွေ ပိုတွက် ရမယ် …memory ပိုသုံးရသလို rendering times လဲ ပို ကြာစေပါတယ် ။
ဥပမာ - ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Result ရဖို့ အတွက် gamma value 1 နဲ့ သွားမယ် ဆိုရင် အဆင့် 10 ဆင့်သွားရမယ် ဆိုရင်
LWF (gamma 2.2 ) နဲ့ ဆိုရင်5ဆင့် လောက်ပဲ သွားရမယ့် သဘောပါ ။
၂ ။ ကိုယ် က တစ်ချိန် မှာ ဒီထက်ပိုပြီး တိုးတက်အောင် သွားဖို့ ရည်ရွယ်ထားတဲ့ အတွက် professional pipe line မှာ compositor တွေ နဲ့ ဆက်ဆံရမယ် ထို့ အတူ ကိုယ်လဲ တစ်ချို့ ဟာလေးတွေ ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးချင်မယ် ဆိုရင် အခက်အခဲ တွေ နည်းတာမို့ ပါ ။
နောက် အရေးကြီးတဲ့ အချက်လေး ကတော့ ကျွန်တော်တို့ realistic lighting units တွေ နဲ့ actual dimension တွေ သုံးပြီး ဆွဲထားတဲ့ အခန်းတွေ မှာ render လုပ်တဲ့ အခါ light ကို တစ်ကယ် ရှိရမှာ ထက် အများကြီး မြှင့်ပြီး သုံးနေရပါတယ် ။ အဲဒီ အတွက် တစ်ချို့ နေရာတွေ မှာ burn တာတွေ လဲ ပါလာတတ်ပါတယ် ။ အဓိက ပြောချင်တာက တော့ အဲလို အပြင် အတိုင်း ဖြစ်ချင်ရင် gamma setup 2.2 နဲ့ စမှ light intensity အများကြီး တင်ဖို့ မလိုသလို သူတစ်ခုတည်း နဲ့ မပြီးပါဘူး ။နောက် တစ်ခုက vray physical camera ကို တွဲသုံး မှ ဖြစ်မှာ ပါ ။
LWF (gamma 2.2 ) + vray physical camera ကို တွဲ သုံးမယ် ဆိုရင် တစ်ကယ့် lighting units တွေ နဲ့ အနီးစပ် ဆုံး အဆင်ပြေပါတယ် ။ ပိုပြီး realistic approach လဲ ဆန်ပါတယ် ။
အချိန်ရရင် 3ds max နဲ့ vray မှာ gamma 2.2 setup ဘယ်လို လုပ် သလဲ ဆိုတာ ရေးပေးပါ့မယ် ။ lighting units တွေ နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကျွန်တော် ရေးထားတဲ့ lighting နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ပိုစ်တွေ မှာ လေ့လာ နိုင်ပါတယ် ။
Posted by Wai Phyo at 9:43 AM0comments Links to this post
Interior Design ဆို သည်မှာ
ဒီနေ့ ခေတ်မှာ Interior Design ဆိုတဲ့ စကားလုံးက အတော့်ကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် ကြားနေရပါတယ်။ ကျွန်တော့် အနေနဲ့ လဲ ပြည့်ပြည့် စုံစုံတော့ သိလှ တယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သိသမျှ လေးတွေ ကို စနစ်တစ်ကျ ဝေမျှ ပေးချင်ပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက် ကတော့ Interior Design နဲ့ ပတ်သတ်နေတဲ့ ၀န်းကျင် စိတ်ဝင်စား တဲ့ သူတွေ အတွက် သိသင့်တဲ့ ဗဟုသုတ လေးတွေ ဝေမျှ ပေးချင်တာပါ။ ဒါမှ လဲ Interior Design နဲ့ ပတ်သတ် ပြီး ဘယ်လို လုပ်ငန်း ဆောင်တာတွေ ပါဝင်တယ် ၊ ဘယ်လို တာဝန်တွေကို ယူရတယ် ဆိုတဲ့ အသိတွေ ရှိလာပြီး မှန်ကန်တဲ့ တာဝန်ယူသူတွေ ကို ဘယ်လို တန်ဖိုးထား ရတယ် ဆိုတာ သဘောပေါက် နားလည်လာမှာပါ။
Interior Design ဆိုတဲ့ ၀န်းကျင်ကို လက်ရှိ သတ်မှတ်ထားတဲ့ တာဝန်တွေ ပေါ်မူတည်ပြီး လုပ်ဆောင် ရမယ့် အပိုင်းတွေ အလိုက် သက်ဆိုင်ရာ နာမည် တွေ သတ်မှတ် ပေးထားပါတယ်။
၁။ Interior Architect
၂ ။ Interior Designer
၃ ။ Interior Decorator ဆိုပြီး ယေဘူယျ အားဖြင့် ၃ မျိုး ခွဲ ထားပါတယ်။
Interior Design ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို International Interior Design Association ( IIDS ) အဖွဲ့ အစည်း က ကြီးမှူးကျင်းပတဲ့ National Council For Interior Design Qualification ( NCIDQ ) Exam အတွက် သတ်မှတ်ထားတဲ့ အဓိပ္ပါယ် ကို ကျွန်တော် နားလည် သလောက် Overall ခြုံငုံ ဖော်ပြပါ့မယ်။
Interior Design ဆိုတာဟာ အဆောက် အဦး အတွင်းပိုင်း တွေ မှာ နဂို ရှိပြီး သား structural အပိုင်းတွေ နဲ့ အံဝင်ဂွင်ကျ ဖြစ်ပြီး နည်းပညာ အရကော တီထွင်ဖန်တီးမှူ အပိုင်းတွေပါ အဆင်ပြေအောင် လုပ်ဆောင် ပေးရပါတယ်။ ဘယ်လို အံဝင်ဂွင်ကျ ဖြစ်အောင် လုပ်မလဲ ဆိုတာ ကတော့ နေထိုင်မည့် သူတွေ အတွက် အသုံးဝင်ပြီး သူတို့ ရဲ့  ယဉ်ကျေးမှူနဲ့ လိုက်ဖက်ပြီးတော့ အမြင်အားဖြင့်လဲ မျက်စေ့ ပဒါဿ ကျကျ ဆွဲဆောင် မှူ ရှိပြီး ကောင်းမွန် တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်လေး ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးရမှာပါ။ ဖန်တီး လိုက်တဲ့ Design ဟာ လည်း လက်ရှိ structural shell ( eg. Existing beam ,column,exterior wall..etc ) တွေနဲ့ အတွင်း မှာ ထားရှိမယ့် လူ အသုံး အဆောင် ပစ္စည်းတွေ နဲ့ အံဝင်ခွင်ကျ ဖြစ်နေဖို့လဲ လို ပါမယ်။
ထို့ အတူ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အဆောက် အဦးအတွက် လိုက်နာရမည့် ဥပဒေ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းတွေ နဲ့ လဲ ကိုက်ညီ ပြီး နေထိုင်မည့် သူတွေ အတွက် safe ဖြစ်ရမယ် ၊ လေ၀င်လေ ထွက် ကောင်းမွန် ရမယ် ၊ သန့်ရှင်း ရမယ် ၊ ကျန်းမာရေး ရှုထောင့် အရပြေလည် ရမယ် ၊ အပူ ချိန် က အစ သက်ဆိုင်ရာ အသုံးပြူမယ့် ပစ္စည်းတွေ က လည်း အသုံးပြူမည့် သူတွေ အတွက် အဆင်ပြေရမယ် ( ergonomic) ဖြစ်ရမယ် ။
နောက်ဆုံး အနေနဲ့ Design ကို ဖန်တီးတဲ့ အခါမှာလည်း စနစ်တစ်ကျ နဲ့ သီအိုရီ knowledge ကြွယ်ဝပြီး ပုံမှန် သမာရိုးကျ ထက် ဖောက်ထွက်နိုင်တဲ့ ဖန်တီးမှူ မျိုးတွေ ကို client ရဲ့  လိုအပ်ချက်တွေ ပေါ် စူးစမ်းလေ့လာပြီး client ကျေနပ်နှစ်သက်တဲ့ Interior Space ရပ်ဝန်းလေး တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်အောင် ဖန်တီးနိုင်တာက အဓိက ရည်ရွယ်ချက် ပါပဲ။
Professional Interior တွေဟာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပညာ အရည်အချင်း , အတွေ့ အကြုံ , အသိအမှတ် ပြူ စာမေးပွဲ တွေ ဖြေဆိုပြီး သတ်ဆိုင်ရာ certificate တွေ ရှိထား ရပါမယ် ။ ဒါတွေ ရှိထား ခြင်း အားဖြင့် client အတွက် ကျန်းမာသန့်ရှင်းပြီး မြင့်မားလုံခြုံတဲ့ လူနေမှု ဘ၀ တွေ အပြင် ငွေကြေးအရလဲ မလိုအပ်ပဲ မကုန်ကျစေ အောင် စတဲ့ Interior Designer တွေ တာဝန်ယူ ရမယ့် နယ်ပယ်တွေ အတွက် ဆောင်ရွှက်နိုင်တဲ့ ယုံကြည် ရမယ့် အရည် အချင်း တွေ ရှိတယ် ဆိုတဲ့ အမှတ် အသား တွေ ကို ကိုယ်စားပြုနိုင် တဲ့ သူတွေ လို့ အသိ အမှတ် ပြူထားတဲ့ သဘောပါ။ အသေး စိတ် တာဝန်တွေ ကို လဲ သတ်မှတ်ထား ပေးပါတယ်။ ဒါတွေကို တော့ နောက်ထပ် ပိုစ် တစ်ခု အနေနဲ့ ဆက်ပေးပါ့မယ်။
Posted by Wai Phyo at 11:13 AM0comments Links to this post
မိရိုးဖလာ အနာဂတ် နှင့် အလုပ်
ပတ်ဝန်းကျင် တစ်ခုလုံး အိပ်မောကျ နေချိန်မှာ အတွေးတစ်ချို့  နှင့် မောင်မောင် တစ်ယောက် အိပ်မပျော်ခဲ့ပါဘူး ။ မနက်ဖြန် သူ့ရဲ့ မိရိုးဖလာ လုပ်ငန်းစဉ် ဖြစ်တဲ့ ဘ၀ ရှေ့ရေး အတွက် တိုင်းတစ်ပါး သို့ သွားပြီး အလုပ်ရှာ ဖို့ လေဆိပ် သွားရတော့မယ်လေ ။ ပညာတတ်တွေ အသွားများတဲ့ စင်ကာပူ ပေါ့ ။
ဆယ်တန်းအောင် လို့ အင်ဂျင်နီယာ ကျောင်းလေးပြီး အသက် ၂၀ ၀န်းကျင်ပါပဲ ။ အလုပ်ထဲ တစ်နှစ်လောက်လုပ်သက် ရှိလာတော့ လစာ ၆ သောင်းလောက် နဲ့ အဆင်မပြေလို့ တစ်ခြား အလုပ်ပြောင်းဖို့ စီစဉ် မိပြန်တော့ ကိုယ့် အရည်အချင်းနဲ့က တစ်သိန်းလောက် ရတောင် ရေရှည် အဆင်ပြေဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ ဒါနဲ့ပဲ နိုင်ငံခြား ထွက်လုပ်မယ် ဆိုပြီး အော်တိုကတ် သင်တန်းတက် ပြီးပြန်တော့ 3D လည်း လိုတယ်ဆိုလို ထပ်တက် လိုက်ပါတယ်။ 3ds max တတ်ထားရင် လာစာကောင်းတယ် ဆိုလို့ အပြေးအလွှား တက်ရပြန်နဲ့ ၆ လ..ရ လ လောက် အကြာမှာ အားလုံး ပြီးသွားခဲ့ပါတယ်။ စပီကင် သင်တန်းလည်း ဒီကြားထဲ တွဲတက်ထားတာပေါ့နော် ။ ကိုယ့်ဘက်ကတော့ အတော်ပြည့်စုံအောင် ပြင်ဆင်ထားတာပါပဲ။ အဆင်ပြေကောင်း ပါရဲ့  ။ မပြေရင်တော့ ရှက်စရာကြီး ??? ပြေမှာပါ …သူများတွေ တောင်ကိုယ့်လောက် မတတ်ပဲ အလုပ် အဆင်ပြေနေ ကြတာပါပဲ ။
၁ ။ ဟိုရောက်ရင် အင်မီဂရေးရှင်းက ရစ်ပြီး ပြန်လွှတ်ရင် ပြဿနာပဲ ?
၂ ။ အင်မီဂရေးရှင်း က တစ်လ မပေးပဲ ၂ ပတ်ပဲ တုံးထုပေးရင်တော့ ဒုက္ခပါ ပဲ ?
၃ ။ အဲဒါ တွေ အဆင်ပြေဖို့ အရေးကြီးတယ်..ကျန်တာက ဟိုရောက်ရင် ကြည့်လုပ်လို့ရတယ် ….
၄ ။ အင်း အလုပ်ရပြန်ရင်လဲ ပတ်စ် တွေ မကျဘူး ကျပ်နေတယ်တဲ့ ?........etc
ဒီဖြစ်စဉ်လေးမှာ မောင်မောင်တစ်ယောက် ဘာလို့ ဒီလိုတွေ စ်ိတ်ပူနေရလဲ ။အဲဒါတွေ အဆင်ပြေသွားရင်ကော ဘာတွေ ထပ်ပြီး အခက်အခဲ ကြူံမလဲ ။နောက်ဆုံး အလုပ်ရသွားတောင် ဘယ်လို အလုပ်မျိုး ရနိုင်မလဲ ။ အဆင်ပြေတဲ့ အလုပ်ဆိုတာကကော ??? လစာ ကောင်းကောင်းနဲ့ သက်သက်သာသာ လား ?
ဟုတ်ပြီ အဲလိုတွေ အဆင်ပြေသွားတောင် ရေရှည်ကို ဘာနဲ့ professional ဖြစ်အောင် ရပ်တည်မလဲ ?
ဖြစ်ချင်တာတော့ “ အများအားဖြင့် အလုပ် အထိုင်ကျရင် ကျောင်းဆက်တက်မယ် ပြီးမှ အဲဒီ လိုင်းပေါ်ရပ်တည်မယ် ’’ ။ ဒါ အဖြေတွေ အတော် များများထဲက အကောင်းဆုံး အဖြေလို့ ပုံမှန် အားဖြင့် ယူဆလို့ ရပါတယ်။
ကျွန်တော့် အမြင်အရ ပြောရမယ်ဆိုရင် မောင်မောင်လို လူငယ်တွေ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်မှာ နေရာစုံ အလွှာ ပေါင်းစုံ မှာ ရှိနေပါတယ်။ တစ်ကယ်ဆိုရင် တိုင်းပြည်ရဲ့  အနာဂတ်တွေ ပါ။
သေချာ တွေးမိမယ် ဆိုရင် သူတို့ တွေ မှာ ကိုယ်ပိုင် အနာဂတ် ရည်မှန်းချက် ရေရေ ရာရာမရှိပဲ ရှေ့က သူတွေ အများစု လုပ်နေကြတာ ပဲ အတုယူပြီး ကြုံသလို သွားနေကြတာပါ။
သူတို့ တတွေ ရဲ့  အနာဂတ် မရေရာ ဘူးဆိုရင် တိုင်းပြည်ရဲ့  အနာဂတ် ဟာလဲ ဘယ်လိုမှ ရေရာမှု ရှိဖို့ အတော့်ကို မသေချာတော့ပါဘူး ။
ကျွန်တော် ပြောတဲ့ အနာဂတ် ရည်မှန်းချက်ဆိုတာ မြန်မာပြည်မှာ တင်မဟုတ် ပါဘူး။ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ အလုပ် လုပ်နေသူတွေ အများစုလဲ ဒီရေစီးကြောင်းထဲ မြောပါရင်း အဆင်ပြေသလို ရှင်သန်နေကြတာပါပဲ။ အနေ ဆင်းရဲ အစားဆင်းရဲ ပေမယ့် အတွေး မဆင်းရဲဘူး ဆိုရင် မျှော်လင့်ချက် ရှိပါသေးတယ်။ အနေချမ်းသာ အစားချမ်းသာပေမယ့် အတွေးဆင်းရဲနေမယ်ဆိုရင် ဘယ်အချိန် ပြဿနာ နဲ့ ရင်ဆိုင်ရပြီး အခြေအနေတွေ ပြောင်းသွားမလဲ လို့ အမြဲ ပူပန်နေရဦးမှာပါပဲ။
အများစု အနေနဲ့ သိကြမှာပါ။ ငယ်စဉ်ကတည်းက အရမ်းဖြစ်ချင်တာ ရှိပြီး အဲဒီ ဖြစ်ချင်တဲ့ အတိုင်းပဲ မဖြစ်ဖြစ်အောင် တစ်စိုက်မတ်မတ် အားစိုက်ပြီး လုပ်ကြတာ။တစ်ကယ်က အဲဒီလို လူတွေက အတော်နည်းပါတယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းက ဖြစ်ချင်တာ တစ်မျိုး လူငယ် ဖြစ်စမှာ တစ်မျိုးနဲ့ ကျောင်းပြီးကာစမှာ တစ်မျိုး စသဖြင့် နီးစပ်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့  လွှမ်းမိုးမှု ပေါ်မှာ ပြောင်းလဲ သွားကြတာ များပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် အများအားဖြင့် ဆယ်တန်းအောင် university တက်စ အချိန်အရွယ် ၀န်းကျင်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သေချာ ဆန်းစစ်ကြည့် ဖို့ လိုပါပြီ ။
ကိုယ် ဘယ်လို အလုပ်မျိုးတွေ လုပ်ရတာ ပျော်မွေ့ သလဲ ? ဘယ်လိုမျိုးတွေ နဲ့ အကျိုးပေးများသလဲ စသဖြင့် သေချာ စန်းစစ်သတိထား ခဲ့မယ်ဆိုရင် ကိုယ် ဘယ်လို လမ်းကိုလျှောက်ရမယ် ဆိုတာ သတိပြူမိလာမှာပါ။ ငယ်စဉ်ဘ၀ တည်းက တောက်လျှောက် ၀ါသနာ ပါခဲ့တာမျိုး ရှိရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်ရှိကျွန်တော်တို့ ရှင်သန်ကြီးပြင်းရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် နဲ့ ဆိုရင်တော့ ဘွဲ့ရခါနီး အရွယ်လောက်မှာပဲ သေချာ ဆုံးဖြတ်လို့ ရတာ များမှာပါ။
ဥပမာ အနေနဲ့ graphic designer တစ်ယောက် ဖြစ်ချင်တယ် ဆိုပါစို့ ။ ဒါနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အခြေခံ သင်တန်းတွေ အရင်တက်ရမှာပါ ။ အဲဒီ အချိန်လောက်ဆို ဗဟုသုတ လဲ အနည်းငယ် ရှိပြီ ဆိုတော့ ဒါနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ၀န်းကျင်ကို သေချာ လေ့လာရတော့ပါမယ်။ webdesign ဆွဲချင်တာလား ၊ logo တွေ magazine ဒီဇိုင်းတွေ ဆွဲချင်တာလား…နောက် bill board တွေက အစပေါ့ media လုပ်ငန်းတွေ နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ကြီးကြီး မားမား တွေ လုပ်ချင်တာလား။ ဒါတွေက ဘယ် လို ခေါင်းစဉ်တွေ အောက်မှာ ရှိမလဲ စသဖြင့် professional ကျကျ သွားနေတဲ့ လမ်းကြောင်းတွေ detail တွေ လေ့လာပြီး ကိုယ်လိုက်ချင်တဲ့ လမ်းကြောင်းကို သေချာ ထပ်ဆင့်လေ့လာ ရပါမယ်။
ဒီဇိုင်း သီအိုရီ အခြေခံတွေ ကအစ အဆင့်မြင့် အထိ လုပ်ငန်းအတွေ့ အကြူံတွေ လဲ ယူ ..ထပ်လဲ လေ့လာ …selfstudy အပိုင်းအနေနဲ့ လဲ လေ့လာ စသဖြင့် အချိန်ယူ ကြိုးစားဖို့ လိုပါတယ်။ ဥပမာ- intermediate Level လောက်ရောက်တဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ် ရှေ့ဆက်လျှောက် ရမယ့် လမ်းကို ကိုယ်တိုင်တွေးခေါ် စဉ်းစား ဖြတ်သန်းရမယ့် အသိရှိလာပါ လိမ့်မယ်။
အဲဒီ အချိန်ဆိုရင် ဥပမာ- နိုင်ငံခြား သွား အလုပ်လုပ်မယ် ဆိုပါစို့ ။ဟိုမှာ ကိုယ် ရပ်တည်တဲ့ လိုင်းနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး ဘာတွေ လုပ်နေလဲ ဘယ်လိုဟာတွေ အထိ လုပ်နိုင်ဖို့ လိုလဲ စသဖြင့် ပြင်ဆင်ပြီး အဲဒီ လိုင်းနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အလုပ်ကိုပဲ ဦးတည်ပြီး ပြင်ဆင်သင့်ပါတယ်။ ထို့ အတူ အလုပ်လုပ်ရင်းကျောင်းတွဲတက်မယ် ဆိုရင်လဲ ကိုယ်လဲ ၀ါသနာပါ ။လက်ရှိလဲ လုပ်နေတဲ့ အတွက် အခက်အခဲ အကြီးအမား မရှိပဲ ကျောင်းကိုလဲ ထပ်ဆင့်တက်နိုင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို upgrade လုပ်နိုင်တာပေါ့။ နိုင်ငံခြား မသွားချင်ဘူး ဒီမှာ ပဲ အဆင်ပြေနေတယ်ဆိုရင်လဲ လက်ရှိ အခြေအနေမှာ ကျေနပ်မနေပဲ international မှာ ဘာတွေ လုပ်နေလဲ အဲဒီ quality တွေ ကိုယ်လဲ လုပ်နိုင်အောင် ကြိူးစား နေဖို့ လိုပါမယ်။
ဒီလိုမျိုးလေးတွေ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ လမ်းကို ဦးတည်ပြီး သေချာ လျှောက်လှမ်းမယ်ဆိုရင် နိုင်ငံတစ်ကာမှာ လုပ်တဲ့ သူတွေလဲ တိုင်းပြည်မှာ ရှိတဲ့သူတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး အများကြီး တွဲလုပ်ပြီး နိုင်ငံတစ်ကာ နဲ့ ယဉ်ဘောင်တန်း နိုင်အောင် ကြိူးစားနိုင်သလို ၊ ပြန်လာခဲ့ မယ်ဆိုရင်လဲ အချိန်မရွေး ရပ်တည်နိုင်ပါတယ်။
ဥပမာ အနေနဲ့ ဆိုရင် ..ကျွန်တော် စကာင်္ပူ မှာ အလုပ်လုပ်တုန်းက ရုံးက စီနီယာ visualizer တစ်ယောက်က အင်ဒိုနီးရှားက ပါ။ သူ တစ်နှစ်ခွဲလောက် အလုပ်လုပ်ပြီး အထာကျလာတော့ သူ့နိုင်ငံပြန်သွားပြီး ဟိုကပဲ online ကနေ ရုံးတက်ပြီး လစာကောင်းကောင်းနဲ့ အိုးမကွာ အိမ်မကွာ လုပ်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။ အလုပ်ရှင် အနေနဲ့ လည်း လုပ်ငန်းလဲ အထာကျ လစာလဲ အများကြီး ပေးစရာ မလို ၊ စက်ပစ္စည်းက အစ ရင်းနှီးစရာ မလိုပဲ အလုပ်က အဆင်ပြေနေတော့ အတော် သဘောကျစရာကောင်းပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ် အလိုက် ဒီလို အဆင်ပြေတဲ့ အခြေအနေ မူကွဲတွေ အများကြီး ရှိပါလိမ့်မယ်။
တစ်ကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့  အနာဂတ်ဟာ ကျွန်တော်တို့တတွေ ရဲ့  လက်ထဲမှာပါ။ကျန်တဲ့ policy ပိုင်းတွေ ကြောင့် အခက်အခဲ တော့ ရှိပေမယ့် ကျော်ဖြတ်လို့ ရပါတယ်။ ကိုယ်တိုင် သိဖို့ အတွေး မဆင်းရဲ ဖို့ လိုပါတယ် ။
ဒီလိုသာ ဆိုရင် မောင်မောင် လို မလိုအပ်တဲ့ ပူပန်မှုတွေ အစား အဓိက ထားပြီး အားစိုက်သင့်တာ ကို အချိန်ပေးနိုင်ပြီး ဘ၀ ရည်မှန်းချက်လဲ ရှိ တိုင်းပြည်လဲ အကျိူးရှိမယ့် အနာဂတ်တွေ စိုပြည်လာမယ်လို့ မျှော်လင့်ရင်း ……
Posted by Wai Phyo at 12:44 PM0comments Links to this post
မေးလေးပေးထားပါနော် အသစ်တင်တိုင်း ဆက်သွယ်ဖို့ပေါ့
Software tips & trips
ကျွန်တော် တို့ အဖွဲ့ အနေနဲ့ ဝေမျှထားတဲ့ web site လေးတစ်ခု ဖန်တီးထားပါတယ် လည်လည်သွားနိုင်ပါတယ် နော် Authentic Corner ဆိုတဲ့ www.a-corner.net မှာပါ။
လိုတဲ့သူတွေအတွက် တန်ဖိုးရှိတယ် ထင်ရင် ကျေးဇူးတင်၍..
material board လုပ်တဲ့ အကြောင်းလေး
တစ်ခြားဟာ လဲ ဖြစ်နိုင်၏..း)
material 3d (1)
software key (2)
ဖတ်စရာ blog စာရင်း
International tips & tuto: for Autocad 3d & rendering
M&E အတွက် တန်ဖိုးရှိသောနေရာ
KP3 Family (ဘလော့နည်းပညာ)
ပါကြီးရဲ့  ဖန်တီးချက်များ...